မအူပင်မြို့နယ်၊မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် စောင့်ကြပ်နေသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။
မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းက ကွန်တိုင်းလေး၊ လက်ပံကုန်း၊ အဒိတ်၊ ပပင်၊ ပလောင် စတဲ့ကျေးရွာသားတွေက ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီမွေးမြူရေးတစ်ခုက ငါးကန်အတွက် သိမ်းထားတဲ့လယ်မြေ လယ်ဧက ၅၅၀ ကိုထွန်ယက်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တင်းမာမှုဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေ့လယ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခမှာ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ အဒိတ်ကျေးရွာသား ဦးမောင်စိုးက RFA ကိုအခုလို ပြောပါတယ်။
“သူတို့ခြိမ်းခြောက်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့က ပစ်မယ်ခတ်မယ်လို့တော့ မထင်မိဘူးပေါ့နော်၊ အဲလိုမထင်မိတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ကဖယ်ခိုင်းတော့ ကျနော်တို့က မဖယ်ဘူး၊ မဖယ်တော့ ၁၄၄ ထုတ်တယ်၊ ပထမတော့ တုတ်တွေနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့၊ တုတ်တွေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ မိန်းကလေးတွေကို ရိုက်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ ဘာမှမထူးဘူးဆိုဘူး မိန်းကလေးတွေကလဲ သူရိုက်ကိုယ်ရိုက်ရိုက်ကြတယ်၊ အဲလိုနဲ့ရိုက်ပြီး သူတို့ကပြေးသွားကြရော၊ ပြေးပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို ခံပြီးတော့ပစ်တာ၊ အဲလိုခံပြီးတော့ပစ်တဲ့အခါကျတော့ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာလဲ ရှိတယ်ပေါ့နော်၊ အချက်ပေါင်းခန့်မှန်းခြေကတော့ ၁၅၀ လောက်ရှိတယ်၊ ပြည်သူတွေဘက်ကို လှည့်ပြီးတော့ ပစ်တာကတော့ ၃၀၊ ၄၀ လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်”
အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကတော့ ဒီကနေ့ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုဖြစ်စဉ်မှာ ကျေးရွာသား ၃၀၀ ကျော်က ပုဒ်မ ၁၄၄ အမိန့်ကို ဖီဆန်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၀ ကျော်ကို တုတ်၊ဓားတွေနဲ့ ဝင်ရောက်ရိုက်နှက် ခဲ့တဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးကျည်ဆန် ၆ ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် မအူပင်ဆေးရုံကိုတင်ပို့ကာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ လယ်သမားတွေကတော့ ဒီနေ့လို အဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ရပေမယ့် မိမိတို့ဘိုဘွားစဉ်ဆက်က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်မြေပြန်ရဖို့ကြိုးစားတာကို ရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလယ်မြေဧက ၅၅၀ ကျော်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ခုနှစ်က ဒေသခံရွာသားတွေဆီကနေ လျော်ကြေးမဲ့ သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းက ဖြေရှင်းကြပါ။
Feb 27, 2013 08:58 AM
Balance of power between government and peoples is necessary.
At the kings' era, before invention of guns, weapon power between kings' army and peoples are more or less balanced. Ifaking went extreme position and majority of peoples did not support the king, the king would be removed by peoples power.
With today's technology, you could not do that unless you bear enough fire arms to balance.
Feb 27, 2013 08:12 AM
Good,we must show our courage to this so called New Government,which acts same like Military Regime,that intentionally and unfairly occupied ,our grand parents 's lands. Bravo.I salute and respects to those Farmers of Ma-U- Bin.